Iipiknik, njengomthetho, qalisa kakhulu ngamandla kunye nentshukumo. Omnye wenza i-brazier, umntu ubeka ukutya nokusela, omnye umntu ufaka iintente. Kodwa emva kokuba wonke umntu atywala aze adle, abantu abayazi ukuba benzani nabo - bavuthiwe. Ngoko ke, ngaphambi kokuba uhambe uhambo oluya kwimvelo, kufuneka ucinge kwaye ujabule, umdlalo wepikiniki oya kwenza ukuba ezinye zibe yi-adventure engalibalekiyo. Ngezantsi kuneemidlalo ezimbalwa ezihle kakhulu ezinokuncedisa ukungazi kakuhle.
Umdlalo wokuqala wohlobo "lombane". Kwiimidlalo yepikiniki ukususela ebuntwaneni kulula ukuyifumana. Nokuba uhambo oluya epikinikini lunokuthi lube yinto yokuzonwabisa, ukuba ngabahlobo benza iimephu zendlela yokufikelela kwindawo ekhethiweyo. Ukusetyenziswa kweefowuni eziphathekayo kunokwenzeka kuphela njengendlela yokugqibela yokukhetha, umzekelo, ukuba umntu ulahleka. Unako ukuxhoma iimpawu malunga nendlela eya kuxelela bakho abahlobo ukuba bahamba ngendlela efanelekileyo.
Unokudlala ukudlala. Umdlalo oliliweyo, kodwa umhle kakhulu. Kulo mdlalo, abantu ababini bamelela emacaleni enkundleni baze bazame ukubetha ibhola kwabanye abadlali abaphakathi kwesiza.
Umdlalo olandelayo "ufumane iibhotile." Lo mdlalo ugxininisa kakhulu kwiimidlalo zomdlalo wezemidlalo. Nangona i-barbecues ifakiwe, umntu unokufihla iibhotile ngotywala, umzekelo, emlanjeni. Yaye xa i-shish kebab isendleleni, wonke umntu uya kuqala ukukhangela amabhotile. Ophumeleleyo nguye ofumana iibhotile. Ophumeleleyo angakwazi ukufumana umvuzo.
Omnye umdlalo onokwenzeka unomdla. Kule mdlalo, amadoda amaninzi kufuneka ahlale kwi-koryachki, kwaye abanye baya kugxuma kubo, ngelixa bexhomekeke ezandleni zabo baziphose ngokwabo. Kungcono ukudlala lo mnandi emva kokusela kotywala sele sele kudla.
"Izindlovu kwipikiniki." Lo mdlalo uba mnandi xa wonke umntu sele eshushu. Ingundoqo yomdlalo kukuba kubalulekile ukwabelana ngamaqela amabini (ngamnye kufuneka abe nenani labantu). Emva koko inxalenye yabantu abavela kwiqela elifanayo lihleli kumahlombe wabanye abantu kwiqela labo. Kwizandla zabantu abahleliyo bathatha iibhepreads okanye itilesi. Umsebenzi wabadlali kukuzisa abantu ukusuka kwelinye iqela ukuya emhlabathini. Kufuneka udlale ngokucophelela.
Iingcola. Lo mdlalo udumileyo kwaye unomdla. Zonke ziyahlula zibe ngamaqela amabini. Iqela lokuqala kufuneka liqikelele igama okanye ibinzana kwaye lixelele omnye wabadlali besinye iqela (umdlali omnye kuphela kwiqela kufuneka ave eli binzana). Emva koko, kufuneka abonise igama okanye ibinzana kwiqela lakhe ukuze bakwazi ukuqaphela igama abanalo engqondweni.
Umdlalo we-badminton. Ngokuqhelekileyo iipikiniki zithatha i-badminton racquets kunye nabo, kodwa ekugqibeleni, kunqabile ukuba umntu udlala: ngamanye amaxesha umoya ufika endleleni, kwenzeka ukuba i-shuttle iqhubela emanzini ukuze kungenakwenzeka ukuyifumana. Kule meko, umzekelo, unokubetha inhla okanye enye into. Ngamanye amaxesha kuvela kukuzonwabisa.
Ukudlala kumbutho. Lo awuwona umdlalo osebenzayo, kodwa ukuzola. Omnye umntu ushiya "ukuhamba", kunye nabo bonke abaqeshwayo abasalayo kwenye yabo abakhona epikinikini. Xa umhambi ebuyela, uqala ukubuza imibuzo malunga nombutho kwiqela. Ngale ndlela uzama ukuqagela umntu ofunwayo. Imibuzo ingaba yohluke kakhulu: yintoni umbala umntu adibeneyo, yiphi indlu okanye isilwanyana sasendle, kunye naluphi umzobo wejometri, njl. Ukuhlaziya iimpendulo, kubalulekile ukuba uqikelele ukuba ngubani oceliwe. Uhleka kakhulu xa ucinga ngomntu oqikelayo. Ngamanye amaxesha uqikelele ihafu yesure okanye ngaphezulu. Imidlalo efanayo kwipikiniki ayikwazi ukukhawuleza ukuzonwabisa, kodwa ikuvumela ukuba ufunde ngabanye kwaye ucinge ngezinto ezininzi ezithakazelisayo.
Ibhola ngaphandle kwemithetho. Lo ngumdlalo ocolileyo kwaye ujongayo, xa wonke umntu egijima entsimini kwaye ezama ukukhaba ibhola.
Umdlalo "oza kugqoka ngokukhawuleza." Xa bedlala emva kotywala obunxilisayo, imidlalo ifumana intsingiselo ekhethekileyo. Ingundoqo yale mdlalo kukuba abo babini bazama ukugqoka kwi-touch. Izinto ezahlukeneyo zifakwe kwi-package: i-swimsuits, iikhotshi, ibhulukwe, iebhatyi, njl. Emva koko ezi zimbini zivalelwe kwaye ziqala ukufumana into enye kwiphakheji kwaye zigqibe oko zinezinto, zize zibeke izinto ngokwazo. Lowo uqikelela ukuba uninzi lwazo zonke iinqununu.
Umzana waseBuki Tikic
Uluhlu oluphezulu oludumileyo lwe-2015 lwentambo ka-2015
Iingubo ezizikhethela ngokuhlwa
Ukutya kwe-Banana ukulahlekelwa kwindleko
Isaladi ye-squid nemifuno
Intetho enhle kwi-call yokugqibela - evela kubazali, abaphumelele kwi-9 ne-11 kwiklasi, ootitshala beklasi, ulawulo lwesikolo
Yintoni enokuyenza xa ubuhlungu buhlungu entweni